Iza amin'ireo karazan-tsofina introvert 4 ianao? - Fialamboly Fotsiny
Iza amin'ireo karazan-tsofina introvert 4 ianao?
Introversion dia karazan-toetra izay ampahan'ny ampahany betsaka amin'ny mponina milaza fa latsaka ao anatiny, fa inona marina no dikan'izany?
Io no fanontaniana ezahin'ilay psikology Jonathan Cheek sy ny mpiara-miasa aminy hamaly rehefa nanadihady momba ny introvert momba ny toetrany manokana izy ireo. Hitan'izy ireo fa nampiasa fiteny isan-karazany ireo olona ireo rehefa nilazalaza ny dikan'ny hoe introverion.
Ny fehin-kevitra tokana izay nahatonga saina an'i Cheek dia ny tsy misy famaritana tokana afaka mandrakotra ny toetra rehetra ananan'ireo olona niditra an-tsokosoko. Raha tokony ho izy, nampiasa ny fampahalalana nangoniny, izy sy ny ekipany dia nanolotra karazana introvert 4 miavaka.
Toy ny toetra mampiavaka ny hafa ihany, ny olona iray dia tsy ho an'ny vondrona tokana, fa mety hifandray akaiky kokoa amin'ny sasany noho ny hafa izy ireo (na miovaova noho ny fotoana sy ny toe-javatra).
Ireo karazana fidirana an-tsokosoko 4 dia:
ara-tsosialy - fifampiraharahana amin'ny fitiavan'ny olona iray hankafy vondron'olona madinidinika na fitokanana amin'ny vondrona lehibe kokoa.
fisainana - mikasika ny haavon'ny fitsirihana olona iray ary tena-taratra firy ny fotoana lanin'izy ireo am-pifaliana ao an-dohany.
manahy - mikasika ny fahasosorana mahatsapa ny olona iray tsy amin'ny manodidina ny hafa ihany, fa matetika rehefa irery ihany koa ny fanahiana entin'izy ireo miaraka aminy.
antra - mifandraika amin'ny filàna maka fotoana amin'ny zavatra iray sy ny fomba tokony 'hanafanana' toe-javatra iray alohan'ny hahatsapany ho vonona.
Ny quiz etsy ambany dia tsy natao ho siansa 100%, fa ny valinteninao amin'ireo fanontaniana dia tokony hampiharihary hoe iza amin'ireo karazana 4 izay tena mifanentana aminao amin'izao fotoana izao.
Fanononana 30 mankalaza ny fidiran'ny olona, ​​ny voninkazo ary ny amboadia irery
Inona no vokatra azonao? Zarao amin'ireo fanehoan-kevitra etsy ambany ary lazao raha toa mifanaraka amin'ny toetranao izany.
rehefa malahelo azy fatratra ianao dia maharary
ahoana no ampahafantaro ny namanao fa tianao izy
oviana isika no nividy wcw
Tsapako toy ny resy sy ny tsy fahombiazana